astra.today Kpakpando Amụma July 2021 N'ihi na Ihe niile Ihe akara Zodiac
Onye na-agụ kpakpando
Language Ihe niile 108 Ελληνικά English Dansk Deutsche Español Français Italiano Nederlands Norske Português Suomalainen Svenska Shqiptare Eestlane Gaeilge Lietuvis Magyar Polskie Română Slovák Slovenščina čeština Afrikaans Kreyòl ayisyen Esperanto Pilipino Fryslân Galego Hausa Ōlelo Hawaiʻi Hmong Igbo bahasa Indonesia Íslenska Wong jawa Català Kinyarwanda Қазақ Кыргызча Corsu Hrvatski Kurdî Latine Latvietis Lëtzebuergesch Malagasy Malei Malti Maori Cymraeg Faasamoa Funtsean Sugbuanon Sesotho Gàidhlig na h-Alba Soomaali Shona Kiswahili Sunda Türk Türkmenler O'zbek Chichewa Tiếng Việt Bosanski Yoruba Qhubeka Zulu Pусский български Український Српски Azərbaycan dili Беларуская Монгол Славомакедонец Татар Тоҷикӣv 日本の עברית ქართველი 한국어 አማርኛ عربي հայերեն 简体中文 中國傳統的 ગુજરાતી हिन्दी ខ្មែរ ಕೆನಡಾ ຄົນ മലയാളം मराठी नेपाली ଓଣ୍ଡିଆ ଅରିଜିୟା | پیسټو ਪੰਜਾਬੀ فارسی سنڊي සිංහල ไทย தமிழ் తెలుగు ئۇيغۇر اردو বাংলা יידיש
Live Support Enyemaka Kpọtụrụ
Kpakpando Onye na-agụ kpakpando Nyocha Gba afa Magazino
Harbọchị dị nnọọ mma. You nabatara ịhụnanya ha nyere gị, ịdị nro na oke nghọta. Ọnọdụ gị dị mma nke ukwuu n'ihi na ị na-ewepụta udo na obi iru ala ị ga-adọrọ onye ọ bụla nọ gị gburugburu mma. Bọchị magburu onwe ya maka nhọpụta, nke ga-esi na ya pụta na-adabere na foto mara mma ị ga-eweta.
Ahụike: Lezienụ anya ka gị na ndị ọzọ na-emekọ ihe. Ọ dị mfe iwe iwe.
Lovehụnanya: have nwere ọnọdụ ihunanya na mmụọ nke ịchọrọ ịbịaru ndị ezinụlọ gị nso. Nke a bụ ezigbo ụbọchị iji soro ha rie ma were obere awa ole na ole na-ekpori ndụ n'ụlọ. ... Ọzọ
Gwọ ọrụ sitere n'aka ndị isi na-arụ ọrụ na enyemaka sitere n'aka ndị nọ n'ọchịchị ma ọ bụ ndị agadi, na-eweta ụbọchị a. Have nwere ụzọ nke idozi nguzo gị. Ebube na mmekorita. Daybọchị ọma maka imekọ ihe ọnụ, ebe ọ bụ na ha dabere na nkwụsi ike na ọnọdụ maka nnabata.
Lovehụnanya: Ezigbo ụbọchị iji kwurịta ma gosipụta mmetụta na ebumnuche gị na mmekọrịta.
Ọkachamara: Ezi ụbọchị iji mee ihe gbasara azụmahịa, dịka ị bụ ebumnobi, mgbanwe na izi ezi. Taa ị naghị achịkwa mmetụta gị kama ọ bụ echiche gị. ... Ọzọ
Ndụ mmekọrịta na-atọ ụtọ na ndị maara nke ọma. Taa na-eweta nkwenye ma na -emepụta echiche anụrị. Enwere ike taa taa na mmasị pụrụ iche nke onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe gị ga-egosi gị.
Lovehụnanya: Nwee anụrị! Will ga-eche na a hụrụ gị n'anya taa. You ga-eche na ndụ gị bụ nnọkọ na-enweghị njedebe na ọbụlagodi nnọkọ maka mmadụ abụọ. Ọnọdụ obi ụtọ gị na amara a na-enweghị ike ịkọwapụta ga-eme ka ị ghara iguzogide ya.
Ọkachamara: You ga-enwe ọworkụ ịrụkọ ọrụ ọnụ karịa oge ọ bụla. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmetụta ezigbo mmadụ, nke a bụ ụbọchị dị mma iji zute ha. ... Ọzọ
♋ Ọrịa cancer
Enweghị nghọta na mgbagwoju anya nke mmetụta uche bụ isi ihe na-eduga na omume na-ezighi ezi na nsogbu mmekọrịta ọha na eze, kamakwa na-achịkwa nsogbu ezinụlọ. Hasbọchị nwere ọchịchọ maka mkpofu na-enweghị nchịkwa na nsogbu maka ịba ụba.
Ahụike: predbọchị na - ebute obere nsogbu, nke nwere ike inye gị nsogbu ma mebie ụbọchị gị.
Lovehụnanya: will ga-enwe nnukwu agụụ taa. Mana cheta inye onye gị na ya bi obere ohere ka o nwee ike nwee otu obi. Egbula ya. Were amara gị rata ya iso gị kporie ndụ. ... Ọzọ
A na-ebuli agụụ mmekọahụ na ịma mma gị taa. Nwere ike jiri nkasi obi na obi ụtọ mejupụta ọchịchọ gị site n'aka onye ị nwere mmasị na ya.
Lovehụnanya: Mmekọahụ siri ike taa ma ọ bụrụ na ịnweghị mmekọrịta mmekọahụ ị ga-achọ ịbụ. Have nwere ike ịchọ ịhụnanya na ọganiihu. ... Ọzọ
Ofbọchị nnọkọ na nleta na-enye obi ụtọ! A na-ahụ mmekọrịta ọha na eze na njem ntụrụndụ.
Lovehụnanya: Ọ bụ ezigbo ụbọchị igosipụta ịhụnanya gị nye onye ị hụrụ n'anya. Can nwere ike ime ya n'ụzọ dị mfe. Ọ bụrụ n ’ọ dị ugbu a ị nwetụla ụfọdụ nghọtahie, ọ bụ ohere iji ezigbo ntụzi were dozie ha.
Azụmaahịa: Ọ bụ ezigbo ụbọchị maka ịre ahịa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha nwere ụfọdụ ntụrụndụ ma ọ bụ ngwaahịa metụtara ya nke ụmụ nwanyị na-eji. ... Ọzọ
Ọ na-adịkarị imebiga ihe ókè na ịla n'iyi. Ọnụma nke ịzụ ahịa na-eduga gị imefu ego ma na-akwa ụta maka ya, ebe mkpa maka enyemaka gị nwere ike iduga gị gabiga oke.
Lovehụnanya: have ga-akpachara anya, n'ihi na ebe ị nwere ohere ịmepụta mmekọrịta ọhụrụ, ị ga-arapara n'àgwà mpụga, nke n'oge ahụ agaghị ezute gị. ... Ọzọ
Mmetụta na-ezukọ n'otu! Ima osobo ima! Obi ọmịiko na ọmịiko! Nghọta na-ezute nghọta! A mara mma nke ukwuu ụbọchị na-enye gị obi nche na ike magnetize onye ọ bụla!
Lovehụnanya: Na-ebute ụzọ na mmekọrịta gị taa, ihe ọ ga-eju gị anya. Edebela onye ọ bụla n'ọchịchịrị maka mmetụta gị ma gosipụta mmetụta ị na-enwe. Maka ndị na - anọghị na mmekọrịta, ha ga - enwe ezigbo ohere ibido.
Ọkachamara: Ọ bụrụ n ’ị chere na nkwado nke ndị ọzọ dị mkpa, ọ bụ ụbọchị ịchọ ya. ... Ọzọ
Ọkachamara: will ga-enwe mmetụta dị oke mkpa taa ma ị ga - enwe ike ịnagide ọtụtụ okwu ọkachamara, nke ị ga - emecha ghọta na ọ baara ha uru. Ọkachamara ọkachamara metụtara ịma mma ka amasịkarị. ... Ọzọ
Mgbe ị na-eche mkpa nghọta, ịhụnanya na ịdị nro, ọ na-esiri gị ike ịnụ ụtọ ha n'ihi na ihe ndị dị na mpụga na-akpali gị. Iji nagide, ị nwere ike ịmalite ma zuru ike na ntụrụndụ. Ahụ ike
: O siri ike ịchịkwa onwe gị taa, ma zere ọgba aghara. Mfe ibu ibu ma ọ bụ nri afọ.
Lovehụnanya: Gị na mmekọrịta gị siri ike taa ma ị ga - eme nke ọma na ndị enyi gị, yana ndị hụrụ gị n'anya ma ọ bụ ndị nwe nwanyị. Otú i si ekwu otú obi dị gị na mgbe ị na-ekpori ndụ nwere ike ime ka ị na-ekwubiga okwu ókè.
Ọkachamara: ofbọchị izu ike na ịdị jụụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ, ị gaghị enwe nsogbu na mmekọrịta gị na ndị ọzọ, mana ọ ka mma ịhapụ mbugharị ma ọ bụ nkwekọrịta dị mkpa, n'ihi na ị ga-adị mfe ịme nkwekọrịta iji zere esemokwu na esemokwu. ... Ọzọ
Udo nke obi nke na-enwupụta taa, bụ ike na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ha doo anya ma mee ka ha nwee ịhụnanya na ịhụnanya.
Lovehụnanya: Mmetụta ịhụnanya na-esi ike karị n'oge mmetụta ụwa a. Obi na-eru gị ala, ọnọdụ gị dị mma yana ọgụgụ isi gị na-apụta ma na-eme ka ị maa mma.
Azụmaahịa: Ezi ụbọchị iji kpọtụrụ ndị otu. ... Ọzọ
Lovehụnanya: Mmekọahụ siri ike taa ma ọ bụrụ na ịnweghị mmekọrịta mmekọahụ ị ga-achọ ịbụ. Have nwere ike ịchọ ịhụnanya na nnukwu ọganiihu. ... Ọzọ
Onye Na-ahazi Kpakpando
Hazie ndu gị na ịgụ kpakpando nke ọma!
Nyocha Erotic Synastry na Ndakọrịta. Mmekọrịta Erotic, Ọkachamara, Nne na Nna na Nwa, Enyi na mmekọrịta ọ bụla.
N'ihi na Ike, Mkpofu, Ihe doro anya, Tọ, Ahụ, Chioma, Afọ, Gbanwee, N'ike mmụọ nsọ, Akụnụba!
Horoscope nke omumu
Ubochi omumu Nyocha na Maapụ
Onye ọ bụla Amụma
Amụma Smart na ilekiri! Gafe.
Amụma N'ihi na Ihe niile
Horoscope nke omumu, Na-aga n'ihu, Gafe, Mmekọrịta, Ọganihu nke Synastria, Ngwakọta, Mgbanwe mgbagwoju anya.
Ntughari gi na oge
Gafe na Ubochi omumu.
Obodo ma ọ bụ Obodo Nta
Dee obodo ma ọ bụ obodo nta (yana ụda ma ọ bụrụ na ị dee Greek na nke obere ma ọ bụ nke ukwu) wee chere ka ọ pụta na sekọnd ole na ole mgbe nke a gasịrị na igbe ga-emeghe mgbe ị kwụsịrị ịpị ihe. Ọ bụrụ na obodo ma ọ bụ obodo apụtaghị, pịnye mkpụrụedemede bekee, na / ma ọ bụ họrọ Mba na igbe gara aga. I nwekwara ike ide naanị mkpụrụedemede mbụ nke obodo ahụ wee chere ka nsonaazụ pụta họrọ.
Ọ bụrụ na ịhọrọghị Mba ma ị na-eji World dum, ị nwere ike pịnyekwa mba ahụ iji belata nsonaazụ ya. Maka United States naanị pịnye US na ọ bụghị United States. Ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na obodo gị bụ San Francisco, pịnye
sun francisco anyị
Ọ bụrụ na obodo ahụ bụ Washington n'ihi na Washington karịrị akarị, ị nwekwara ike pịnye steeti ihe atụ:
ma ọ bụrụ na ị họrọla mba mbụ ma jiri United States dịka ọmụmaatụ dee naanị obodo / obodo ma ọ bụghị obodo ahụ.
Ọ bụrụ na ị gbalịsie ike ịchọta obodo gị yana ederede ahụ anaghị arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ ị gaghị ahụ obere wiil na-agbagharị n'akụkụ aka nri nke mmanya ebe ị pịnyere, pịagharịa obodo ma ọ bụ weghachite leta ikpeazụ ma degharịa ya.
amụma nzuzo Nkwekọrịta ikike Enyemaka Banyere